China PVC/PU coated simbi waya tambo kusvetuka tambo 3mm 4mm fekitari uye vagadziri |Bangyi
Digital Skipping Rope Sports Training Smart Weight Calories Nguva Yekusvetuka Tambo neCounter
Tambo yekusvetuka iyi ine kaunda (isina bhatiri) inokwanisa kukuzivisa kuti kangani pawakasvetuka zviri nyore.Chengetedza nhamba yekusvetuka kwaunoita nekaunda yedu iri nyore yakavakirwa mubato.
Tambo Saizi 0.45cm*300cm
Bata Saizi 3.5cm*18cm
Rope Ruvara Bhuruu, Girini, Pingi
Option Tambo, Ropeless
Kurema 130 magiramu
Package 1 pc yakazara muhomwe ye opp;ipapo 100 pcs mu caron
Kusvetuka Tambo Yakaremerwa Yekusvetuka Yekumhanyisa Kudzidziswa, Kutsungirira Kudzidziswa uye Gym Workout
KUSUKA TAMBO NE COUNTER:
Iyo yekusvetuka tambo yekugadzira fitness ine 9 tsoka kureba kwetambo, unogona kugadzirisa nyore kune yakakura kureba pasina zvishandiso zvemunhu akareba.Havasi vakuru chete asiwo vana vanogona kuitamba.Yakakwana kusvetuka tambo yevarume, vakadzi, vana uye vechidiki.
HAKUNA TANGLE UYE HAKASIMBA:
Iyo yekusvetuka tambo yekurovedza muviri yakagadzirwa neyakakora yakarukwa waya yesimbi ine PVC yakavharwa, iyo inoratidzira kwenguva refu nekushandisa hupenyu uye isingatyoke nyore kuti ive nechokwadi chekusashanda uye kutsetseka.100% tangle yemahara, isina tambo yakamonyoroka kunetseka zvakare!
UNONZWA KUNOFANIRA PARUOKO RAKO :
Mubato wekunze wemubato wakagadzirwa nerabha yakapfava, uye kumusoro kune convex antiskid particles izvo zvinoita kuti igadzikane kubata uku ichipa kubata kwakadzikama.
Kana iwe usinganyatso kufadzwa netambo dzedu dzekutanga dzekusvetuka, ingo taura nesu uye isu tinokuburitsa nekukurumidza kutsiva kana kudzoreredza kuzere kwemari yako pa-po-po!Hapana mibvunzo inobvunzwa.
(1) yakarongedzwa mubhegi re opp uye 100 pcs mumakatoni
(2) pfeka mapallets kana muhomwe yemapuranga.
(3) kurongedza sezvinodiwa zvako.
Isu tinotsigira ratidziro yepasirese kune yako yekuenzanisira odha: Kunge TNT, DHL, FedEx, UPS, EMS, nezvimwe.
Isu tinotumira iyo yakawanda odha neGungwa, nechitima, nezvimwe.
Kugadzira nguva: 7-15 mazuva ekushanda
1. Semugadziri, isu tiri kambani inobatanidza kugadzirwa kwefekitari nekutengeserana uye kutengesa.
2. Tine nhoroondo yemakore anopfuura gumi.Uye zvakare, isu tine yakakura kutengesa system, iyo inogona kupa masevhisi ehunyanzvi kune vatengi vedu.
3. Kambani yedu yakapfuura ISO, CE, SGS.
4. Tinogona kugadzira nekugadzira zvigadzirwa maererano nehukuru hunodiwa uye zvinyorwa maererano nezvinodiwa nevatengi vakasiyana.
5. Tinobvuma kudhinda logo yetsika.
Zvakapfuura: Amazon inopisa kutengesa Waya inorema Skipping Tambo Inogadziriswa kureba Inonyaradza furo mubato
Zvinotevera: Professional Fitness Kudzidzisa Multifunctional Calorie Digital Counter PVC Rope Skipping
tambo yokusvetuka isina tambo
kurovedza muviri kurema cordless
svetuka tambo yedhijitari
svetuka tambo yemagetsi
svetuka tambo kumhanya calorie
pink skipping tambo
tambo yekusvetuka isina tambo
kusvetuka tambo yedhijitari inogadziriswa
kuremerwa kusvetuka pasina tambo
7*7 1*19 PVC/PU yakavharwa simbi waya tambo kusvetuka...
svetuka tambo tenga, kugwinya kusvetuka tambo, tambo yokusvetuka isina tambo, kusvetuka tambo akachenjera, bata kusvetuka tambo, nyanzvi yekusvetuka tambo,